Inqubo yokushisela yensimbi yensimbi ehlanganisiwe-Imboni Yezindaba-Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd.
Inqubo yokushisela yensimbi yensimbi ehlanganisiwe
Isikhathi: 2021-02-22 Ukushaya: 39
Weld Welding lashukumisa steel ishidi
Ungqimba lwe-Zinc eshidini lensimbi lashukumisa luletha ubunzima ngesikhathi sokushisela. Izinkinga ezinkulu yilezi: ukwanda kokuzwela kokushisela imifantu kanye nezimbobo, ukuhwamuka kwe-zinc nothuli, ukufakwa kwe-oxide slag, ukuncibilika nokulimala kwezingubo ze-zinc. Phakathi kwabo, ukuqhuma kwe-welding, izimbobo zomoya kanye nokufakwa kwe-slag yizinkinga ezinkulu.
Ngesikhathi senqubo yokushisela, i-zinc encibilikisiwe ihamba phezu kwechibi elibunjiwe noma impande ye-weld. Njengoba iphuzu lokuncibilika le-zinc liphansi kakhulu kunensimbi, i-iron echibini elincibilikisiwe icwebezela kuqala, bese i-zinc engamanzi ingena phakathi komngcele wensimbi, okuholele ekwenzeni buthakathaka kwezibopho eziphakathi kwe-granular. Ngaphezu kwalokho, ama-intermetallic brittle compounds Fe3Zn10 ne-FeZn10 akhiwa kalula phakathi kwe-zinc nensimbi, lokho kuqhubeka kunciphisa ukubumbana kwensimbi yensimbi. Ngakho-ke, kulula ukuqhekeza izibopho zokusanhlamvu ngaphansi kwesenzo sokushisela ukucindezela okusele.
1) Izici ezithinta ukuzwela kwemifantu
① ukujiya kwe-zinc enamathela, i-zinc enamathela yensimbi ehlanganisiwe iyincane futhi ayizweli kakhulu ekuqhekekeni, kuyilapho i-zinc enamathela yensimbi eshisayo ishubile futhi izwela kakhulu ekuqhekekeni.
Thickness Ubukhulu obukhulu bento yokusebenza, ukucindezela okukhulu kokuzibamba kwe-welding nokuzwela okukhulu kwe-crack.
③ Igebe elikhulu ukuthi, ukuzwela okukhulu kokuqhekeka.
Indlela yokushisela. Ukuzwela kokuqhekeka kwe-arc okwenziwa ngesandla kuncane kunangesikhathi se-CO2 welding welding.
2) Izindlela zokuvimbela imifantu.
① Ngaphambi kokushisela, inkatho emise okwe-V, emise okwe-Y noma i-X kufanele yenziwe eshidini elihlanganisiwe. Ukumboza i-Zinc eduze kwe-groove kuzosuswa yi-oxyacetylene noma ukuqhuma kwesihlabathi, futhi igebe ngeke libe likhulu kakhulu, ngokuvamile cishe ngo-1.5mm.
Material Khetha okokushisela okuqukethwe okungaphansi kwe-Si. Intambo yokushisela enokuqukethwe okuphansi kwe-Si kufanele isetshenziswe ngesikhathi sokushisela igesi evikelekile, uhlobo lwe-titanium kanye ne-titanium calcium type welding rod kufanele isetshenziswe ngesikhathi sokushisela ngesandla.
(2) Izimbobo zomoya
Ngaphansi kwesenzo sokushisa kwe-arc, ungqimba lwe-zinc eduze kwe-groove lukhiqiza i-oxidation (yakha i-ZnO) nokuhwamuka, okwenza intuthu emhlophe nomusi kube lula, ngakho-ke kulula ukudala izimbotshana ngesikhathi se-weld. Okwamanje okuphezulu ngesikhathi sokushisela, i-zinc ukuhwamuka okungathi sína kakhulu kubangelwa futhi i-porosity ebucayi kakhulu. Ngesikhathi sokushisela ngohlobo lwe-Ti nohlobo lwe-TiCa electrode, akulula ukudala izimbotshana ezinebanga lamanje eliphakathi. Kodwa-ke, lapho uhlobo lwe-cellulose nama-electrode ohlobo oluphansi lwe-hydrogen kusetshenziselwa ukushisela, i-porosity kulula ukwenzeka ngaphansi kwamanje aphansi futhi aphezulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-welding rod angle kufanele ilawulwe ebangeni le-30 ° kuya ku-70 ° ngangokunokwenzeka.
(3) Ukuhwamuka kwe-zinc nothuli
Lapho ishidi lensimbi elihlanganisiwe lifakwa yi-arc welding, ungqimba lwe-zinc eduze kwechibi elincibilikisiwe kuxhunywe ku-ZnO futhi kuhwamuka ngaphansi kwesenzo sokushisa kwe-arc, kwakha uthuli oluningi. Ingxenye eyinhloko yalolu hlobo lothuli yi-ZnO, enomphumela omuhle oshukumisayo ezithweni zokuphefumula zabasebenzi. Ngakho-ke, kufanele kuthathwe izinyathelo ezinhle zomoya omncane ngesikhathi sokushisela. Ngaphansi kokucaciswa kokushisela okufanayo, inani lentuthu nothuli elikhiqizwa ngokusebenzisa i-titanium oxide electrode liphansi, kanti inani lentuthu nothuli olukhiqizwa yi-hydrogen electrode ephansi likhudlwana.
(4) Ukufakwa kwe-oxide
Lapho i-welding yamanje iphansi, i-ZnO eyakhiwe ngesikhathi senqubo yokushisa akulula ukubaleka, lokho kubangela ukufakwa kwe-ZnO slag kalula. Iphuzu lokuncibilika kweZnO ngu-1800 ℃. Ukufakwa okukhulu kwe-ZnO slag kunomthelela omubi kakhulu ku-weld plasticity. Lapho kusetshenziswa i-titanium oxide electrode, ukusatshalaliswa kweZnO kulungile futhi kuyunifomu, okunomphumela ongasho lutho kupulasitiki namandla aqine. Kodwa-ke, lapho kusetshenziswa uhlobo lwe-cellulose noma i-hydrogen type electrode, okuqukethwe kwe-ZnO ku-weld kuphakeme, futhi ukusebenza kwe-weld akukuhle.
Welding ubuchwepheshe bensimbi lashukumisa
Insimbi ehlanganisiwe ingafakwa nge-welding ye-arc yesandla, i-MIG welding, i-argon arc welding, i-resistance welding nezinye izindlela.
(1) Welding Manual arc
1) Ukulungiselela ngaphambi kokushisela
Ukuze kuncishiswe uthuli lokushisela futhi kuvimbele ukuqhekeka kwe-welding nama-blowholes, ungqimba lwe-zinc eduze komsele kufanele lususwe ngaphezu kokulungiswa okufanele kwe-groove ngaphambi kokushisela. Indlela yokususa kungaba ukomisa amalangabi noma ukuqhuma kwesihlabathi. Ukususwa kweGroove kufanele kulawulwe ngaphakathi kwe-1.5-2mm ngangokunokwenzeka. Lapho ubukhulu bokusebenza bukhulu, bungancishiswa bube ngu-2.5-3mm.
2) Ukukhethwa kwenduku yokushisela
Isimiso sokukhethwa kwenduku yokushisela ukuthi izakhiwo zomshini zensimbi yensimbi kufanele zisondele esisekelweni, futhi okuqukethwe kwe-silicon yensimbi efakiwe kufanele kube ngaphansi kuka-0.2%.
Amandla ahlanganisiwe atholakala ngokusebenzisa i-ilmenite type electrode, i-titanium oxide type electrode, uhlobo lwe-cellulose electrode, i-titanium calcium type electrode kanye ne-hydrogen yohlobo lwe-electrode engasiza ekufinyeleleni inkomba eyanelisayo. Kodwa-ke, ukufakwa kwe-slag ne-porosity kulula ukuvela ku-welding seam nge-hydrogen electrode ephansi ne-cellulose electrode, ngakho-ke ayisetshenziswa kakhulu.
I-J421 / J422 noma i-J423 electrode kufanele kukhethwe ishidi lensimbi eliphansi lashukumisa. I-E5001, i-E5003 nezinye izinhlobo zezinduku zokushisela zingasetshenziselwa ishidi lensimbi lashukumisa ngamandla ebanga elingaphezulu kwe-500MPa. Ama-electrode e-E6013, E5503 ne-E5513 kufanele asetshenziselwe ishidi lensimbi lashukumisa ngamandla angaphezu kwe-600MPa.
Ngesikhathi sokushisela, i-arc emfushane izosetshenziswa ngangokunokwenzeka, i-arc swing ayivunyelwe ukuvimbela ukunwetshwa kwendawo yokuncibilika kwe-zinc, eqinisekisa ukumelana nokugqwala kwento yokusebenza nokunciphisa inani lothuli.
(2) WIG Welding
I-CO2 i-welding welding noma i-Ar + CO2, i-Ar + O2 i-welding yegesi evikelekile ingasetshenziswa kokubili ukushisela. Indlela yokuvikela igesi inomphumela osobala kokuqukethwe kwe-Zn ngesikhathi sokushisela. Lapho kusetshenziswa i-CO2 emsulwa noma i-Co2 + O2, okuqukethwe kwe-Zn ku-weld kuphakeme, lapho i-Ar + CO2 noma i-Ar + O2 isetshenziswa, okuqukethwe kwe-Zn ku-weld kuphansi. Ngokwanda kokushisela kwamanje, okuqukethwe kwe-Zn ku-weld kuncipha kancane.
Lapho igesi evikelekile ye-arc isetshenziselwa ukushisela insimbi yensimbi, intambo ye-welding inkulu kakhulu kunangesikhathi sokushisela i-arc ngesandla, ngakho-ke kufanele kunakwe ngokukhethekile ukukhipha intuthu. Izici eziyinhloko ezithinta inani nokwakheka komsizi igesi yamanje neyokuvikela. Okwamanje okuphezulu noma okuqukethwe kwe-CO2 noma i-O2 ekuvikeleni igesi kungukuthi, intambo enkulu yokushisela, okuqukethwe kwe-ZnO ngomlilo nakho kuyanda. Okuqukethwe okuphezulu kwe-ZnO kungafinyelela kuma-70%.
Ngaphansi kwesibalo sokushisela esifanayo, ukungena kwensimbi ehlanganisiwe kukhulu kunensimbi engagxiliwe. I-T-joint, i-lap joint kanye ne-welding mpo ebheke phansi izwela kakhulu ku-welding porosity, isivinini se-welding esiphakeme, i-porosity elula ivela; ngoba lashukumisa ingxubevange steel nethonya ngejubane Welding kuyinto esobala ikakhulukazi. Ngesikhathi se-multi pass welding porosity ukuzwela kwephasi elandelayo kuphakeme kunokudlula kwangaphambilini.
Ukwakheka kwegesi evikelayo akunamthelela omkhulu kuzici zemishini yamalunga, ngakho-ke i-CO2 emsulwa isetshenziselwa ukuwelda. Inqubo yokushisela imingcele ye-I-joint, i-joint ye-lap ne-T-joint inikezwa kumatafula 1-3.
Ithebula 1 Amapharamitha wokucaciswa we-CO2 Welding yensimbi ehlanganisiwe ebunjiwe eyi-But
Ukujiya kwebhodi / mm igebe / mm Isikhundla Welding Ijubane lokondla ngocingo / mm · s-1 Amandla we-Arc / V Zokushisela zamanje / A Isivinini sokushisela / mm · s-1 Amazwi
1.6 0 Welding Flat, Welding mpo, Welding ovundlile, phezulu Welding 59.2~80.482.550.850.8~55 17~20171818~19 70~9090100100~110 5.1~7.25.98.5- Welding wire ER705-3 ubukhulu 0.9mm ukunwebeka ezomile 6.4mm
3.2 0.8~1.5 Welding Flat, Welding mpo, Welding ovundlile, phezulu Welding 71.971.971.971.9 20202020 I-1.35135E + 11 5.57.66.85.5
Ithebula 2 Imininingwane ye-CO2 Welding yensimbi yensimbi ehlanganisiwe
Ukujiya kwebhodi / mm Isikhundla Welding Ijubane lokondla ngocingo / mm · s-1 Amandla we-Arc / V Zokushisela zamanje / A Ijubane le-Welding / mm · s-1 Amazwi
1.6 Welding Flat, Welding ovundlile, Welding phezulu, Welding mpo 50.850.850.850.8 1919~2019~2018 110100~110100~110100 5.1~6.85.5~6.84.2~5.15.5~6.8 Welding wire ER705-3 ubukhulu 0.9mm ukunwebeka ezomile 6.4mm
3.2 Welding Flat, Welding ovundlile, phansi Welding mpo, phezulu Welding 67.267.267.759.2 19191919 I-1.35135E + 11 3.8~4.23.8~4.25.13.4~3.8
Ithebula 3 Amapharamitha wokucaciswa we-CO2 Welding yensimbi yensimbi engu-T-joint (ilunga elihlangene)
1.6 Welding Flat, Welding mpo, Welding phezulu, Welding ovundlile 50.8~5555~65.65559.2 181919~2020 100~110110~120110120 －－5.95.1 Welding wire ER705-3 ubukhulu 0.9mm ukunwebeka ezomile 6.4mm
3.2 Welding Flat, Welding mpo, Welding ovundlile, phezulu Welding 71.971.971.971.9 20202020 I-1.35135E + 11 4.75.94.25.1
Okwedlule: Izindiza zokuqala zabagibeli zasekhaya ze- "C919" ezivela ku-Honeycomb neminye imikhiqizo ehlanganisiwe maduze izokwethulwa ngomsebenzi wezindiza
Okulandelayo: Ipuleti lezinyosi lensimbi engagqwali